Horudhac: Real Valladolid vs Barcelona… (Kooxda Barca oo doonaysa inay soo yareyso dhibcaha ay Real Madrid kaga hayso hoggaanka horyaalka La Liga) – Gool FM
(Valladolid) 11 Luulyo 2020. Kooxda Barcelona ayaa eryanaysa hoggaamiyeyaasha horyaalka La Liga ee Real Madrid, waxaana ay doonayaan inay soo yareeyaan dhibcaha ay ka horreyso Los Blancos, marka ay soo caawa oo Sabti ah booqanayaan garoonka Estadio Municipal Jose Zorilla, halkaasoo ay kula ciyaarayaan Real Valladolid.
Kooxda haysata horyaalnimada Spain ayaa soo gali doonta kulankan kaddib guushii 1-0 ee ay ka gaareen Espanyol Arbacadii, halka Valladolid guuldarro 2-1 ka soo gaartay Valencia 24 saac ka hor.
Garoonka: Estadio Jose Zorrilla
Oscar Plano ayaa ku soo laabtay kooxda kaddib ganaax uu ku maqnaa, waxaana la filayaa in si dhaqso leh uu u hoggaamiyo weerarka isagoo taageero helaya Sergi Guardiola.
Mohammed Salisu ayaa shaki uu ku jiraa inuu ciyaari karo kulankan, iyadoo Javi Sanchez iyo Joaquin Fernandez la filayo inay ka ciyaaraan daafaca dambeedka dhexe ee kooxda martida loo yahay.
Pablo Hervias iyo Toni Villa waa inay ka soo muuqdaan garoommada, halka Fede San Emeterio la rajeynayo inuu ku soo bilowdo khadka dhexe, isagoo ka faa’iideysanaya dhaawaca Michel.
Ansu Fati ayaa ganaax kaga maqnaanaya kooxda Barcelona kaddib markii uu casaan toos ah qaatay kulankii Espanyol ee ugu danbeeyay ee uu kaga soo muuqday horyaalka La Liga.
Riqui Puig ayaa laga yaabaa inuu ku soo bilowdo safka hore ee Barcelona kaddib markii uusan ku lug lahaanin waqtigiisii ugu dambeeyay oo dhan, taasoo keeni karta inuu Sergi Roberto dib ugu laabto daafaca midig si uu uga bedelo Nelson Semedo.
Lionel Messi, Luis Suarez iyo Antoine Griezmann ayaa la filayaa inay sii wadaan ka ciyaaristooda weerarka kaddib bandhiggii saddex geesoodka ahaa oo ay dhowaan soo bandhigeen.
>- Kooxda Barcelona ayaa guuleysatay 11 ka mid ah 12-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay Real Valladolid tartammada oo dhan.
>- Barcelona ayaan la garaacin sagaalkeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Ligaha Spain.
>- Kulankoodii hore waxaa 5-1 ku badiyey Kooxda kubadda cagta Barcelona.
>- Kooxda martida loo yahay ayaa kaliya hal guul ku heshay gurigooda 7-dii kulan ee ugu dambeeyay.
Horudhac: Sheffield United vs Chelsea… (The Blues oo doonaysa inay sii wadato guuldarro la'aanteeda xiriirka ah ee Premier League)